Muuri News Network » Xog: Xildhibaanada Beesha Ogaadeen iyo Shariif Xasan Sh. oo ay ka dhex tafan tahay + Sababta.
Xog: Xildhibaanada Beesha Ogaadeen iyo Shariif Xasan Sh. oo ay ka dhex tafan tahay + Sababta.
Kulan ka dhacay magaalada muqdisho ee Caasimada Somalia oo u dhexeeyay Xildhibaanada Beesha Ogaaden ayaa waxaa looga soo horjeestay dhismaha Baarlamaanka maamulka Koonfur galbeed ee Somalia.
Cabdi-wahaab waxa uu sheegay in Baarlamaanka uu dhisay shariif Xassan aysan ku qanacsaneyn shacabka ku nool Gobolka Shabellalaha Hoose iyo Bakool, waxa uuna sheegay in Baarlamaankaasi uu yahay mid u shaqeyn doona Shariif Xassan oo kaliya.